0909.0512 အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: May Moe Thu
ကြည့်သူအရေအတွက်: 51 (+1)
???3Season Fashion ???
??Preorder Full Prepaid Item??
??Waiting 2or3 Weeks??
☎☎Vb No.09767497300 or One Kyat Chat Boxမှorderတင်ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါပီနော်☎☎
??Ygnမြို့တွင်းDelivery Serviceရှိ မြို့နယ်အလိုက်ပို့ခအသီးသီးကျသင့်ပါမည်ဖြစ်ပါသည်??
??နယ်မြို့များသို့ကားဂိတ်မှသော်၎င်း အိမ်အရောက်ပို့စနစ်ဖြင့်စာတိုက်မှသော်၎င်း ပို့ပေးပါသည် ကားဂိတ်ပို့ခသိုမဟုတ် စာတိုက်ပို့ခ+တန်ဆာခ အပါ ငွေလွှဲရာတွင်ပေါင်းထည့်လွှဲပေးရပါမည်??
??50000ဖိုးနှင့်အထက်ဝယ်သူများအား Deli freeပါနော်??
???ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့် သာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ???
ချည်သားဘောင်းဘီ4ကွာတာ ၊ အရှည်...
pepco without flower